အရူးအတွေး (အနိုင်အရှူံး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » အရူးအတွေး (အနိုင်အရှူံး)	10
Posted by uncle gyi on May 10, 2015 in My Dear Diary, Think Tank | 10 comments
မကြည့်လိုက်ရပါဖူး ဖဘ မှာတက်လာကြတဲ့စာတွေကြည့်ပြီးပက် နိုင်သင့်တယ်ပြောသူနဲ့
ပက် ကလိုက်ထိုးသလောက် မေ၀ယ်သာကပတ်ပြေးနေတာလည်းအမှန်ပါ
About uncle gyi
uncle gyi has written 17 post in this Website..
View all posts by uncle gyi →	Blog
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သည်ရက်တွေ အင်မတန် လူပြောများတဲ့ ကိစ္စရပ်ပဲ ဗျို့…
ခံစစ် ဆိုတာ ကြည့်လို့မလှပေမယ့် .. အောင်နိုင်ရေးပဓာန မှာတော့ အတော် အသုံးတည့်သားဗျ..
စာမေးပွဲများလိုပေါ့ … ဂုဏ်ထူးမထွက်ချင်နေ မကျဖို့ အဓိက ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့…
ugly winning ဆိုပေမယ့် နည်းစနစ်ရှုထောင့်ကတော့ လက်ခံရမယ့် အဖြေပါပဲဗျာ…။
padonmar says: လက်ဝှေ့ဆိုတာကြီး ၀ါသနာမပါပေမယ့် ဖွဘုတ်ကနေ ဖတ်လိုက်ရသလောက်မှတ်ချက်တွေမှာ ထူးခြားတာကတော့ အာရှသားတွေ ရဲ့ မပြောရဲတဲ့ အားနည်းချက်ဆိုပြီး ပခုံးဒဏ်ရာရှိကြောင်းစောစောမပြော၊ ဆေးထိုးခွင့်မရ၊တရားစွဲခံရဆိုတာတွေ ဖတ်လိုက်ရတာ သင်ခန်းစာ ယူစရာပဲ မှတ်မိပါတယ်။
နိုင်တိုင်းလည်း တကယ်နိုင်သလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
kai says: လက်သီးတလုံးစာ လေးလက်မလောက် လက်ကပိုရှည်နေတဲ့ မေ၀ယ်သာက… ပတ်ပြေးရင်းထောက်သလောက်… လက်ကပိုရောက်နေတယ်လေ…
မီလီယန်..ရာဂဏန်းဘစ်ဇနက်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
မြစပဲရိုး says: ဟန်ကျတာဘဲ အန်ကယ်ကြီး ရယ်။
ဒီ လက်ဝှေ့က နေ စာတစ်ပုဒ် ရေးဖို့ စဉ်းစားနေတာ။
အစချီ ဘယ်လိုချီရမယ် စဉ်းစားရင်း မစ နိုင်တာ။
အခုတော့ ဒီမှာဘဲ ကျွန်မ တွေးလိုက်မိတာ ကို ချလိုက်ပါရစေ။
ကျွန်မ “တုံး” တာလေး လဲ ပြောလိုက် ဦးမယ်။
အဲဒီ မနက် ဖဘုတ် ပေါ်မှာ သိပ်အချိန်မရ လို့ ကမန်းကတန်း ကြည့်ရင်း Mayweather ဆိုပြီး တွေ့တော့
” အော် ကြည့်ရတာ မေက ရာသီ ပူ လို့ ညည်းကျတယ် ထင်တယ်” ဆိုပြီး ပြီးသွားရော။
ညဖက်ကျတော့ သူငယ်ချင်း ရဲ့ Status မှာ ရေးထားတာ ကြည့်ပြီး လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲ လို့ သိရတာ။
သူက ဘာရေးထားလဲ ဆိုတော့ “ဒါဟာ အာရှသား မို့ သက်သက် နှိမ် ပြီး အနိုင်မပေးတာ” လို့ ရေးထားတာ။
တကယ်တော့ သူက သာမာန်မဟုတ်ဘူး။
တကဲ့ နေရာကြီး တစ်ခု က အကောင်ကြီးကြီး ပါ။
ကျွန်မလဲ မနေနိုင်တာနဲ့ မှတ်ချက် ပေးလိုက်သေးတယ်။
“အာရှသားမို့ နှိမ် ရင် သူ့မှာ ဒီလို အဆင့်ထိတောင် ဘယ်လို ရောက်နိုင်ပါ့မလဲ” လို့။
. အဲဒီချိန်မှာ မှ သတိထားလိုက် မိတာ သူ နဲ့ တင်မပြီး လူတော်တော်များများ ရဲ့ ပက်ကွီရို ကို ဘယ်လိုအားပေးကြောင်း Status တွေဘဲ။
. နောက်ရှုံးတာ ကို အတော်လေးခံပြင်း နေကြပုံဘဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် မယ်ပြိုင်ပွဲ မှာတုန်း က မြန်မာမိန်းကလေး နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မလေး အင်တာနက် အတွက် ဆုမှာလား။ အကျိတ်အနယ် အမှတ်ပြိုင် နေတုန်း အဲဒီ ဖိလစ်ပိုင် တွေ ကို အွန်လိုင်းမှာ ဆဲ ဆို နေလိုက်ကြတာ။
အခုကြတော့ ကိုယ့်မြန်မာလဲ မဟုတ် တဲ့ ဒီ ဖိလစ်ပိုင် ကို အသည်းအသန် ချစ်နေ ကြပြန်ရော။
ဒီမှာတင် မြင်လိုက် မိတာ က ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေ ရဲ့ အုပ်စု ဖွဲ့တတ်တဲ့ သဘောကိုဘဲ။
. မြန်မာ နဲ့ တစ်ခြား ဆို မြန်မာ
. နောက် အာရှ နဲ့ တစ်ခြား ဆို အာရှ
ဒါတင်မပြီး မြန်မာရှုံး ရင် မြန်မာ မို့ နှိမ် တာ။
အာရှ သား ရှုံး ရင် အာရှသားမို့ နှိမ်တာ။
တစ်လောက ဆရာဝန် ကိစ္စ မှာလဲ မြန်မာ မို့ တမင် နှိမ်ပြီး လုပ်တာ ဆိုတဲ့ စွဲချက် တွေ လူတိုင်းပါးစပ်မှာဘဲ။
ဒါမျိုး တွေ ပြောတတ်ကြတာ ရဲ့ အကြောင်းရင်း ကို စမ်းစစ်ကြည့် မိတယ်။
ကျွန်မ ကိုယ်ပိုင် အမြင် ထင်တာကတော့
ကျွန်မတို့ လူမျိုး တွေ ဟာ ကိုယ်တိုင် က ကိုယ့်ထက် နိမ့်ကျသူ ကို နှိမ်တတ် တဲ့ စိတ်၊
ကိုယ့်လူမျိုး ကလွဲ ရင် တစ်ခြား နဲ့ မျှဝေတတ်မှု မရှိတဲ့ စိတ် အဲဒီ အခံ တွေ ရှိနေကြ လို့ များလားလို့။
ဒီတော့ သူများ ကို လဲ ကိုယ့် မှာ ရှိတဲ့ စိတ် နဲ့ နှိုင်းကောင်းနှိုင်း နေတတ်မယ်။
နောက်တစ်ခု က ကျွန်မ တို့ လူမျိုး တွေ မှာ မှန်ကန်တဲ့ တရားရေး တို့ ဥပဒေတို့ ဆုံးဖြတ်ချက် တို့ ကို မခံစားရရှာဘူး။
တစ်ဖက်သတ် အားသာရာ ကို မျက်နှာလိုက် တတ် တဲ့ စရိုက် ယဉ်ကျေးမှု တွေ နဲ့ အသက်ရှင်နေကြရတာ ကလဲ
ဒီလို စိတ်တွေ ကို မီးထိုးပေးနေတာလို့ ထင်တာပါဘဲ။
. ပြောရရင်လဲ တစ်ခြားနိုင်ငံ မှာ ဒီ လို သူများ ကို နှိမ်တာ၊ မျက်နှာလိုက်တာ မရှိ မဟုတ် ရှိပါတယ်။
ဘယ်နေရာ မှာမဆို စိတ်ဓာတ်မြင့်ပြီး ရင့်ကျက်သူ၊ စိတ်ဓာတ်နိမ့်ပြီး ကလေးဆန်သူ ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စနစ် ကောင်း တဲ့ နေရာမှာတော့ ဒီလို စိတ်တွေ နဲ့ ထင်တိုင်း ကြဲပြီး အနိုင်ကျင့် ချင်တိုင်း ကျင့်ခွင့်မရဘူးပေါ့။
ကံမကောင်းလို့ အဲလို ကြုံ ရင်လဲ အဲဒီလို နှိမ်သူ တွေ ကို ဒေါသနဲ့ တုန့်ပြန်မဲ့ အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကို သူတို့ထက်သာအောင်၊ ယဉ်ကျေးအောင်၊ ရင့်ကျက်အောင် ကြိုးစားနေပြ လိုက်တာ က
အကောင်းဆုံး တုန့်ပြန်နည်း လို့ ကျွန်မတော့ မှတ်တာပါဘဲ။
ပို့စ် လိုရင်း ကနေ လွဲ လို့ စိတ်မရှိဘူး လို့ ကျွန်မ ယုံပါတယ်။
ပို့စ်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ အန်ကယ်ကြီးရေ။
ခင်ဇော် says: လက်ဝှေ့ ကိစ္စသီးသန့်ပြောရရင်တော့
မကြည့်ပေမဲ့ ဗမာ လက်ဝေ့ကို ပို သဘောကျတယ်။ ဟိဟိ။
အနိုင် နဲ့ အရှုံးမှာတော့
သိက္ခာရှိတဲ့ အရှုံးက ပိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်
Ma Ma says: (သိက္ခာမရှိတဲ့ အနိုင်ထက်
သိက္ခာရှိတဲ့ အရှုံးက ပိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်)
အဲဒါလေး သဘောကျလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပတ်ကွီနိုင်တယ် ဒါဗျဲ….
Alinsett @ Maung Thura says: လက်ဝှေ့ပွဲတော့ သိပ် စိတ်မပါလို့ မကြည့်ဖြစ်တာများတယ်..
ရဲစခန်းက (ရံပုံငွေဆိုလား) ရဲတချို့ လက်ဝှေ့ပွဲလက်မှတ်တွေ လာရောင်းလည်း မဝယ်ဘူး ပြောလွှတ်တာပဲ..
ဟုတ်တယ်.. ကိုယ်မှ မကြည့်ချင်တာ…
ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့ စာအုပ်တွေ … စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့လူတွေ လာရောင်းလည်း..မဝယ်ဘူးပဲ..
ငါးရာလောက်တန်တဲ့ စာအုပ်အပေါစားတွေကို တစ်ထောင်တွေ ထော့င်ငါးရာတွေနဲ့ လာရောင်းတာကိုး.. အဲ… ၁ စက္ကန့်ကို လက်သီး ၂ ချက်ဝင်အောင် ထိုးတဲ့နည်းလေးတော့ ကျင့်ချင်မိ…
ပလို့ဂျိ .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ugly winning တဲ့လားမောင်ဂီရယ်သုံးသွားလိုက်တာလှပ
ထူးခြားတာကတော့ အာရှသားတွေ ရဲ့ မပြောရဲတဲ့ အားနည်းချက်
” အော် ကြည့်ရတာ မေက ရာသီ ပူ လို့ ညည်းကျတယ် ထင်တယ်”
ဗမာ လက်ဝေ့ကို ပို သဘောကျတယ်
ငါးရာလောက်တန်တဲ့ စာအုပ်အပေါစားတွေကို တစ်ထောင်တွေ ထော့င်ငါးရာတွေနဲ့ လာရောင်းတာကိုး..
Mr. MarGa says: ပွဲသွင်းတဲ့သူတွေနိုင်​တယ် ဖွဘုတ်​မှာ အဲ့နေ့က ပို့စ်တွေ ပလူကိုပျံနေတာပဲ
ငြင်းကြ ခုန်ကြ မေဝယ်​သာကို ဆဲကြ နဲ့
ပွဲကို ကိုယ်​တိုင်လည်း မကြည့်ရ​သေးတာမို့ ဘာမှ သိပ် ပြောစရာမရှိပေမယ့်
ပရိသတ် အတွက် ရသ တစ်​ခုခု ပေးသွားနိုင်​သလား ဆိုတာကို တွေးနေမိ
အနိုင်​အရှုံးနဲ့ ပွဲရဲ့ ရသ မမျှမတ ဖြစ်​သွားတယ်​လို့ပဲ ထင်မိပါတယ် လို့